म वेश्या होइन (कथा) – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
म वेश्या होइन (कथा)
२०७५ पुष २१, शनिबार ०९:२७ गते
खुसी थिएँ, प्रथम श्रेणीमा दस जोड दुई उत्तीर्ण भएँ । २०५६ साल श्रावण महिनाको अन्त्यतिर ट्रान्सक्रिप्ट लिनका लागि काठमाडौँको साइत गरेर बिहान छ बजे नारायणगढ, पुल्चोक पुगेँ । म पनि पुग्नु मकालु यातायात पनि टुप्लुक्क त्यहीँ आइपुग्यो । म सरासर खाली सिटमा गएर बसेँ । केही सिट खाली थिए । बस १५ मिनेट त्यहीँ रोकियो । जब बस हिँड्न सुरू ग¥यो, मेरो काकाको उमेरको यात्री मेरो छेउ आएर बसे । मान्छे भद्र नै थिए । सेतो सर्टमा रातो बुट्टे टाई, अत्तरको वासना छोडेका, यस्सो हेर्दा व्यापारी हो कि जस्ता । बस कुद्यो । म झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेँ । सलल बगेको नारायणी नदी, पहाड, पहाडका ठाउँठाउँमा ससाना घरहरु रहेका सुन्दर रमणीय दृश्यसँग एकोहोरिएँ ।
केहीबेरको मौनतापछि उनले मलाई सोधे– भाइ कहाँसम्म ?
काठमाडौँ सानोठिमी, अनि तपाईं नि दाइ ? (भाइ भनेपछि दाइ भन्नैप¥यो)– मैले भनेँ ।
म कलंकी । कलंकीमा लज छ । घरचाहिँ गैँडाकोट हो– उनले भने ।
म भरतपुर ५, लंकू । सानोठिमी ट्रान्सक्रिप्ट लिन जान लागेको– मैले भनेँ ।
मुग्लिन आइपुगेछ । बस रोकियो । बाहिर सिमसिम पानी परिरहेको थियो । अगाडि रुख ढलेर बाटो बन्द छ, २÷३ घन्टा लाग्छ होला– बसबाहिरबाट आवाज आयो । अगाडि बाटोको एकछेउ बस र ट्रकको लामो लाइन लागिसकेको थियो । हामी दुई बसबाट झरेर एउटा होटेलमा पस्यौँ । चिया अर्डर गरेपछि दाइले सोधे– भाइ अरु केही खाने कि ?
पानी परिरहेको छ, चिसो चिसो भयो दाइ, पिरो पिरो आलुचप खान ठीक होला– मैले भनेँ ।
ए साहूनी, दुई प्लेट आलुचप पनि दिनू है– उनले अर्डर दिए ।
साहूनीले दुईवटा प्लेटमा चार–चारवटा आलुचप र टमाटरको चटनी ल्याइदिइन् । चिसो चिसो मौसममा पिरो पिरो चप निकै मीठो मानी खायौँ । यत्तिकैमा होटलभित्र एउटी केटी रोएको आवाज सुनियो ।
एउटा भुसतिघ्रे मान्छेले एउटी केटीलाई ढोकाबाट बाहिर गलहत्याउँदै गरेको देखियो । केटी आँसु छोडेर रोइरहेकी थिई । भुसतिघ्रे भन्दै थियो– छिटो निक्लिहाल, तलाईं कामचोर नकच्चरी, तलाईं बसीबसी कसले पाल्छ ? नाटक धेरै गर्छेस्, सबै वेश्याहरु यस्तै हुन् । ऊ रिसले भुटभुटाउँदै थियो ।
त्यो केटी दुई हात जोडेर भक्कानिएर भन्दै थिई– मलाईं यहाँबाट ननिकाल्नोस्, म सबै काम गरिदिन्छु ।
– परेको छैन अब तैँले मेरो काम गर्न ।
– म कहाँ जाऊँ ? तपाईंलाई थाहा छ, मेरो कोही छैन ।
– जता जान मन लाग्छ जा, तँजस्ता वेश्या जता गए पनि हुन्छ । भुसतिघ्रे झन् निर्दयी भएर झोक्किँदै थियो ।
केटीले जोरले चिच्याएर भनी– म वेश्या होइन, होइन म वेश्या । उसको आवाज घट्यो– म वेश्या होइन ।
त्यो दृश्य देखेर मेरा आँखा रसाइसकेका थिए । २०÷२१ वर्षकी एउटी केटी त्यसरी एउटा लोग्नेमान्छेको गाली खाएर आँसु पिउँदै रोएको देख्दा मसँग रहेका दाइलाई खपिनसक्नु भएछ । उनी त्यो मोटेनजिक गएर सोधे– के भयो भाइ ? किन गाली गर्दै छौ त्यो बहिनीलाई ? अलिकति मानवता त देखाऊ ।
उसले रिसले चुर हुँदै भन्यो– सोध्नोस् त्यही छँडुलीलाई ।
दाइले बसेर उसको कुममा हात राख्दै सोधे– के भयो बहिनी ? के ग¥यौ र तिमीले यसरी गाली खाँदै छौ ? ऊ घुँक्क घुँक्क गरी रोइरहेकी थिई ।
– ल नरोऊ नरोऊ, के भयो भन त ।
आँसुले भरिएका आँखाले दाइतिर हेरेर उसले भनी– दाइ, म वेश्या होइन ।
ऊ घोप्टो परेर भन्दै थिई– तीन दिन भयो ज्वरो आएर राम्रोसँग काम गर्न सकेकी छैन । आज एक्कासि टाउको बेस्सरी दुखेर सुतिराखेकी थिएँ, त्यसैले काम गरिन भनेर गाली गर्दै हुनुहुन्छ । तर, म कहाँ जाऊ दाइ ? भौँतारिँदाभौँतारिँदै थाकिसकेकी छु म, कहीँ जान्नँ अब ।
म बेन्चबाट उठेर दाइनजिक पुगेर उभिरहेँ । दाइले त्यस केटीको आँसु पुछिदिँदै भने– मेरो काठमाडौँ कलंकीमा लज छ, यहाँ नराख्ने भए हिँड मसँग । काम त्यति धेरै गर्नुपर्दैन । दुई–तीन दिन आराम गर, औषधि खाऊ, निको भएपछि काम गरे हुन्छ, हिँड मसँग ।
उसले आँसु पुछ्दै भनी– दाइ, जीवनमा धेरै रोएँ, बल्ल आज पहिलोपटक कसैले बहिनी भनेर आँखाको आँसु पुछिदिँदै छ । हुन्छ दाइ, म तपाईंसँगै जान्छु ।
वरिपरि हेर्ने मान्छेको भीड लागिसकेको थियो । दाइले त्यो केटीलाई उठाएर साहूनीतिर हेरेर भने– साहूनी, हाम्रो कति रूपियाँ भयो ?
– २६ रूपियाँ ।
साहूनीले बाँकी पैसा फिर्ता दिँदै भनिन्– ल है सर, बहिनीलाई राम्रोसँग लैजानू । त्यो सुनेर वरिपरिका मान्छे मुसुमुसु गर्दै थिए । उनी मेरो सिटमा बसिन्, म अर्को सिटमा बसेँ । ३/४ सिट खाली नै थिए ।
दाइले भने– भाइ, जाऊ त उ त्यहाँ मेडिकल रै’छ, सिटामोल किनेर लिएर आऊ । दाइ खल्तीतिर हात राख्दै थिए, मैले भनेँ– पर्दैन दाइ, मसँग छ । अघि चपको तपाईंले तिर्नुभयो, अब मेरो पालो । दाइले हाँस्दै भने– ल ल, जाऊ त जाऊ ।
सिमसिम पानीमा म दौडँदै मेडिकल पुगेर औषधि र पानी ल्याउँदै दाइको हातमा दिएँ । दाइले त्यो दिदीलाई औषधि खान दिए । औषधि खाएर बसको सिटमा अढेस लगाएर उनले बाहिर हेरिरहिन् । दाइले मतिर फर्केर भने– तिमी कहिल्यै पीर परेर रोएका छौ ?
– छैन दाइ, आजसम्म पीर नै परेको छैन । कहिल्यै पीर पनि नपरोस् र रून पनि नपरोस् । किन सोध्नुभएको दाइ ?
– तिमी भन्छौ कहिल्यै रोएको छैन, तर बहिनीको घुँक्क घुँक्क अझै रोकिएको छैन, कति पीर परेको रै’छ । कसैको जीवन कस्तो त कसैको कस्तो, हामी सबै मान्छे त हौँ नि । ल अब भन त जीवन भनेको के हो ?
– जीवन पानीजस्तै हो ।
– त्यो त पुरानो डाइलग हो, जीवन बगिजाने पानीजस्तै हो, कहिल्यै नरोकिने ।
– मैले भन्न खोज्या अर्कै हो, जीवन भनेको पानी एचटुओ हो, जसमा दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजनको मिश्रणजस्तै जीवन दुई भाग हाँसो र एक भाग आँसुको मिश्रण हो । म नरोए पनि र आँसु नबगाए पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ, अरुको जीवन भोगाइ देखेर ।
– तिमी साइन्सको विद्यार्थी हो कि क्या हो ?
– हो त, त्यसैका लागि त काठमाडौँ सानोठिमी हिँडेको नि ।
बाटो खुल्यो, सबै बसमा चढौँ है– कन्डक्टर कराउन थाल्यो । यात्रु पालैपालो बसमा चढ्न थाले ।
धेरैबेर बस्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो, धन्न चाँडै नै खुलेछ । १२ बजेसम्म त पुगिन्छ कि– बसभित्र एक जनाको आवाज सुनियो ।
अँ पुगिएला, कृष्णभिर नचली बसेको भए, त्यो पनि चल्न सुरू गरेको रै’छ भने आजको १२ होइन अर्को दिनको १२ बजे पक्कै पुगिएला– अर्को आवाज आयो ।
बस हिँड्यो । ती दिदी झ्यालबाट बाहिर हेरेर टोलाइरहेकी थिइन् । दाइले सोधे– बहिनी, टाउको अल्लि हल्का भयो त ?
उनले भनिन्– अँ दाइ, अहिले धेरै कम भयो ।
बस दौडियो । सबै आआफ्ना सिटमा मस्त थिए । कोही निदाउन सुरू गरे ।
दाइलाई चाहिँ त्यो दिदीका बारेमा जान्ने इच्छा लागेछ ।
उनले सोधे– बहिनीको घरचाहिँ कहाँ हो नि ?
दिदीले भनिन्– छैन ।
– यहाँ कहाँबाट आएकी त ?
– बम्बईबाट ।
बम्बई सुनेपछि दाइको मनमा झन कौतुहलता जागेजसरी सोधे– बम्बई ? बम्बई किन गएकी त ?
उनले भनिन्– थाहा छैन, दाइ । उनका नजर झ्यालबाट बाहिर नै थिए ।
दाइले दुःखी हुँदै भने– बहिनी, तिम्रो जीवनमा ठूलै दुःखद घटना भएजस्तो छ । तिमी को हौ ? कसरी र किन बम्बई पुग्यौँ ? फेरि यहाँ कसरी आइपुग्यौ ? नढाँटी बताऊ त ।
मैले आफ्नो टाउको दाइतिर झुकाएर उनको कुरा सुन्न दुवै कान चनाखो बनाएँ ।
उनले भनिन्– सबै कुरा जान्ने, बुझ्ने र थाहा पाउने बेलामा म नारायणगढको पोखरा बसपारकको सडकमा थिएँ । बाबआमा, घर केही थाहा थिएन । बाटोमै कहिले प्लास्टिक टिपेर त कहिले होटेलमा भाँडा माझेर भातसम्म फेला पार्थें । अघिको होटेल पहिले नारायणगढ बसपारकमै थियो । प्रायः उनीहरुकोमा नै भाँडा माझ्थेँ, खान्थेँ । जुटको बोरा ओढेरै भए पनि पुस–माघको कठ्याङ्गिँदो जाडो काटेकी थिएँ ।
एकदिन चिया खान आउने ग्राहकको घरमा बस्ने, काम गर्ने भनेर कुरा आयो । ठूलो घरमा काम पाएर मख्ख परेँ । बच्चाको कपडा धुने, स्कुल पु¥याउने र ल्याउने, घर सफा गर्ने काम सजिलै थियो । घर मालिक पार्टीका नेता थिए, बेलाबेला मान्छेको भीड लागिरहन्थ्यो । खान–लाउन राम्रै दिएका थिए । सानासाना दुई भाइहरु थिए, उनीहरुलाई नै साथी बनाएकी थिएँ । एक वर्ष आनन्दले बिताएँ ।
तीजको अघिल्लो दिन थियो । मालिक्नी दुई छोरालाई लिएर माइत गएकी थिइन् । मालिक राति ११ बजेतिर घर आए । म भ¥याङमुनि सुतिराखेकी थिएँ । ढोका खोलिदिएर म सुतेँ । एकछिनपछि मेरो नजिक आएर बोलाए– अर्पना ।
मै जुरूक्क उठेर भने– हजुर !
–आइजा, यतै आएर सुत, मलाई नि यता एक्लै न्यास्रो लागेर आयो । तँ पनि त्यो कुनामा कसरी सुत्छेस्, अब तँ ठूली भैसकिस्, अप्ठ्यारो लाग्दो होला ।
आफ्नै बाबुले बोलाएजस्तो लागेर निश्संकोच उसको कोठामा पुगेँ ।
उसले ठूलो बिस्तरा देखाउँदै भन्यो– ल, तँ यहाँ सुत, म यता सुत्छु, त्यति भनेर अर्को ओछ्यानमा गएर के के किताब पल्टाउन थाल्यो । त्यो दिन पहिलोपटक त्यति कोमल र न्यानो ओछ्यान पाएकी थिएँ, तर पनि निद्रा लागेन । ओछ्यान प्यारो हुँदोरैन छ ।
बत्ती निभ्यो । अर्को रातो सानो बत्ती बल्यो । ऊ म सुतेको ओछ्यानमा आयो र मेरो छेउमा सुत्यो । बिस्तारै उसले आफ्नो हात र खुट्टा मेरो शरीरमाथि चढायो । म जुरूक्क उठेँ । सानो बत्तीको मधुरो उज्यालोमा उसको निर्वस्त्र नांगो शरीर देखेर म कराउँदै त्यहाँबाट भागेर बाहिर निस्केँ । ऊ अर्पना अर्पना भन्दै गेटसम्म आइपुग्यो र फर्कियो ।
म पुनः आफ्नै पुरानो बासस्थान सडकमै आइपुगेँ । त्यतिबेला त्यो अँध्यारो सडक मलाई कति सुरक्षित र प्यारो लागेको थियो ।
एक वर्षसम्म फेरि सडकमै सडक बालबालिकासँग जिन्दगी बिताएँ । कति माया गर्थे तिनीहरु मलाई । एकदिन लहैलहैमा तिनीहरुलाई छोडेर म काठमाडौँ आएँ । काठमाडौँ आउनु मेरो दुर्भाग्य ! काठमाडौँ आएको एक हप्तापछि म लुटिएँ ।
उनी फेरि रून थालिन् ।
नरोऊ नरोऊ, दाइले भने– कसरी त्यस्तो भयो ?
उनी दुवै हातले आँसु पुछ्दै भन्न थालिन्– काठमाडौँमा पनि सडक बालबालिका नै साथी बनाएकी थिएँ । एकरात म र अरु चार जना एउटा प्रतीक्षालयमा सुतिराखेका थियौँ । गर्मी महिना सिमसिम पानीसँगै चिसो बतास चलेको थियो । बाटोमा मान्छे बोलेको आवाज सुनेँ । आँखा र कान दुवै चनाखो बनाएकी थिएँ । तीन जना जँड्याहा हल्ला गर्दै त्यही प्रतीक्षालयमा आए । एकछिन हल्ला गरेरै बसे । उनीहरुका आँखा ममाथि परेछन् ।
एउटाले भन्यो– तरूनी छ यार ।
अर्कोले सही थाप्यो– हो यार ।
तिनीहरु मेरो नजिक आए, म डराएँ । मलाई समाउन खोजे । म बेस्सरी चिच्याएँ । सबै साथीहरु डरले त्यहाँबाट भागे । साना थिए, भाग्नबाहेक अरु के गर्न सक्थे र !
तिनीहरुबाट उम्किन एकछिन संघर्ष गरेँ, चिच्याएँ, कराएँ तर त्यो मध्यरातमा मेरो आवाज सुनिदिने कोही थिएन । मध्यरात सहरको प्रतीक्षालयमा एउटी बालिकामाथि आफ्नो साहसी पुरूषत्व देखाउने ३ जना लोग्नेमान्छेसँग मेरो केही जोर चलेन । मेरो मुखबाट निस्केको ठूलो चिच्याहटसँगै मेरो इज्जत पनि उड्यो ।
उनका कुरा सुन्दा मेरा आँखा आँसुले टिलबिल टिलबिल गर्दै थिए, तर उनी निडररुपमा ढुक्क भएर बिनासंकोच भन्दै थिइन्– त्यो रात मेरो यो जिन्दगीको ढोका खोलिदिने पहिलो रात थियो । त्यो रातले आज पनि झस्काइरहन्छ ।
त्यो सडकसिवाय मेरो जाने ठाउँ कहीँ थिएन । म बारम्बार त्यही सडकमा लोग्नेमान्छेको हवसको सिकार हुँदै गएँ । जिन्दगीदेखि दिक्क लागेर धेरैपटक भीर र नदीको पुलमा पनि पुग्थेँ, तर मर्न सक्दिनँ थिए र पुनः फर्किन बाध्य हुन्थेँ, त्यही घिनलाग्दो जिन्दगी जिउन ।
एकदिन गलैँचा फ्याक्ट्रीमा काम पाएँ । अब भने जीवनमा केही परिवर्तन हुनेभयो भन्ने झिनो आशा लिएर खुसी हुने कोसिस गर्दै थिएँ । तर, त्यहाँ पनि छिः सबै कामदार र हाकिम ममाथि गिद्धे दृष्टि राख्न थाले । त्यहाँभन्दा नि सडक नै प्यारो लागेर फेरि सडकमा नै आएँ ।
सडक, प्रतीक्षालय, होटेल, बोरा, प्लास्टिक, जूठा भाँडाबाहेक म कल्पना गर्न पनि सक्दिनथेँ । समय बित्दै गयो । फेरि एउटा होटेलमै काम गर्न पोखरा पुगेँ । बिहानदेखि साँझसम्म बगैँचा सफा गर्नुपर्ने, फूलका बिरूवाहरुमा पानी राख्ने र राति पाहुनाको कोठा–कोठामा रक्सी, पानी, चुरोट पु¥याउनुपर्ने । दिनभरि फूलसँग खेल्दा त आनन्द लाग्थ्यो । ठूलो होटेल, विदेशी गोरे पाहुनाहरु पनि नियमित आउँथे । एकरात म्यानेजरको आदेशअनुसार कोठा नं १०९ मा, मलाई कोठाको नम्बर अझै पनि याद छ, पानी र चुरोट लगिदिनू पर्ने लगेर गएँ । त्यस कोठामा एउटा धेरै अग्लो विदेशी गोरे बसेको थियो । दिदी बोल्दाबोल्दै चुप लागिन् ।
ल, पानी पिऊ, दाइले पानीको बोतल दिदीको हातमा राखिदिए । एक घुट्को पानी निलेर उनले भनिन्– त्यो रात पनि म त्यो विदेशी गोरेबाट…..।
उनी रून थालिन् ।
म बसको सिटमा कुहिनोले टेकेर हत्केलाले चिउँडोलाई अढेस दिएर उनका कुरा सुनिराखेको थिएँ । बस रोकियो । दुई जना यात्रु झरे । बस फेरि गुड्यो ।
उनले भन्दै गइन्– त्यहाँ मजस्ता थुप्रै केटीहरु दिनहुँजसो आफ्नो अस्मिता लुटाइरहने रहेछन्, तर सबैका आआफ्नै विवशता थिए । भोलिपल्ट बिहान आफ्नो जिन्दगीलाई धिकार्दै बगैँचाको एउटा छेउमा बसेर रोइरहेकी थिएँ, कसैले पछाडिबाट काँधमा हात राख्दै भन्यो– ए नानी, किन रोएकी ? मैले पछाडि फर्केर हेरेँ, लगभग ३९÷४० वर्षकी एउटी आइमाई, ओठ खैरो लिपिस्टिकले रंगाएकी, छोटो कपाल, कुर्तासुरूवाल लगाएकी । उसले फेरि सोधी– के भो, किन रोएकी ?
मैले उसलाई सबै कुरा सुनाएँ । कसैले त्यसरी सोध्यो भने आफ्नो जस्तो लाग्थ्यो । मेरा सबै अतीत उसका सामुन्ने व्यक्त गरेँ, जसरी अहिले तपाईंलाई सुनाउँदै छु ।
धार्केमा बस रोकियो । कन्डक्टर करायो– ल ल, खाना खान झरौँ । सबै बसबाट निस्किए । भोकाएका रहेछन् क्यारे, सबै होटेलभित्र छिरे । बसभित्र हामी तीन जनामात्र भयौँ ।
दाइले भने– बहिनी, ल उठ, हिँड खाना खान जाऊँ ।
उनले भनिन्– म खान्नँ दाइ, खाने मन नै छैन ।
– त्यसो नभन, जति मीठो हुन्छ त्यति खाऊ, भोकै नबस, शरीर झन् कमजोर हुन्छ, आराम हुँदैन ।
उनले मानिनन् । उनी बसभित्रै बसिरहिन् । दाइ र म खाना खान होटेलभित्र लाग्यौँ । दाइले मलाई सोधे– के खाने ? मैले भनेँ– रोटी खाऊँ न, हुँदैन ?
– मेरो मनको कुरा भन्यौ, ल रोटी नै खाउँ ।
हामी दुईवटा रोटी मगाएर खान थाल्यौँ । मासको दाल, केराउ, आलु र टमाटरको तरकारी, निबुवाको चटनीसँग दाइले ७ वटा र मैले चारवटा रोटी बहुत मीठो मानी खायौँ ।
मैले चारैतिर आँखा डुलाएँ । होटेलमा खाना खानेको भीड थियो । मनमनै सोचेँ– यस्तो भीड छ, राम्रै कमाइ हुन्छ होला । अनि फेरि सोचेँ– नेपाल बन्द, चक्काजामको समयमा त बिजोग नै पो हुन्छ होला ।
दाजुभाइ बसमा चढ्यौँ । उनी सिटमै टोलाइरहेकी थिइन् । उनले सोधिन्– रोटी खाएर आउनुभयो ? उनी हामीलाई चिहाइरहेकी रहिछन् । त्यतिबेला उनको अनुहारमा केही परिवर्तन आइसकेको थियो । उनको मुहार केही खुसी देखिन्थ्यो । उनको अनुहारमा खुसी देखेर मलाई पनि खुसी लाग्यो । म र दाइ आआफ्नो सिटमा बस्यौँ । अरु पनि आएर आआफ्नो सिटमा बस्दै थिए ।
उनले सोधिन्– तपाईंहरु दाजुभाइ हो ?
दाइले भने– अँ हो, आज बिहानदेखि नारायणगढबाट बनेका दाजुभाइ ।
ऊ हाँस्न खोजे जस्तो गरी, तर हासिनँ ।
सबै जना आउनुभयो ?– कन्डक्टर करायो ।
कोही छुट्नुभयो कि ? हात उठाउनोस्– उसको कुराले कोही हाँसे, कोही हाँसेनन् ।
पछाडि बाट आवाज आयो– छैन छैन, जाऊँ जाऊँ ।
बस गुड्यो । झ्यालबाट बाहिर हेरेँ, बस होइन घरहरु दौडिरहेजस्तो देखिन्थे ।
दाइले उनलाई सोधे– खाना खान मानिनौ, ल भन त्यसपछि के भयो ?
म उनको जीवन कहानी सुन्न उत्सुक थिएँ ।
उनले भनिन्– त्यसपछि त्यो आइमाईले भनी– मसँग जान्छेस् ? तलाईं राम्रो काम लगाइदिन्छु । भाग्यवश जीवनमा केही रमाइलो क्षण आउँछ कि भनेर जसले जहाँ भन्यो त्यसैकहाँ किन केही नसोधी हिँड्न मन लाग्दो रै’छ । यस्तो लाग्थ्यो, योभन्दा नर्क कहाँ होला र ! झट्ट हेर्दा स्वभाब राम्रो नदेखिए पनि उसैको साथ लागेर हिँडे । उसलाई विश्वास गर्नु मेरो अर्को दुर्भाग्य ! पछि थाहा पाएँ, उसले मलाई बम्बई लगेर बेचिछ । त्यहाँ पनि उही घिनलाग्दो जिन्दगी । त्यस्तो ठाउँ पनि हुँदो रै’छ कल्पनाभन्दा बाहिरको । धेरै सरापेँ त्यो आइमाईलाई । मैले सरापेर त्यसलाई के नै हुन्थ्यो र ? त्यहाँबाट निस्किने कुनै उपाय थिएन । एक वर्षसम्म त्यहीँ नर्कमा बिताएँ । त्यहीँ बिरामी परेँ, १५ दिनसम्म निको भएन । त्यसपछि केही आराम हुँदै गयो, तर बिरामी भएकै अभिनय गरिरहेँ । एक महिनापछि कसले पाल्छ त्यसलाई, बसीबसी फोकटमा घाटा कसले व्यहोर्छ भनेर त्यहाँबाट निकालिदिए ।
त्यहाँबाट निस्केर अझ जिउने रहरले भौँतारिँदै मेरो सुरूको बासस्थान नारायणगढ, पोखरा बसपार्क आइपुगेँ । पुरानो त्यो होटेल मुग्लिन सरेको थाहा पाएपछि त्यही होटेल खोज्दै मुग्लिन आएँ र त्यही होटेलमा भाँडा माझेर बस्न थालेँ । त्यहाँ आएको पनि नौ महिना भयो । आजसम्म त्यसको सेवा गरेर बसेँ, आज बिरामी हुँदा निकालिदियो, धिक्कार छ त्यसलाई पनि ! अहिले फेरि तपाईंलाई विश्वास गरेर तपाईंको साथ लाएर आएकी छु, भोलि के हुने हो केही थाहा छैन ।
दाइले उसलाई सान्त्वना दिँदै भने– बहिनी, मलाई विश्वास गर, अब तिम्रो जिन्दगी घिनलाग्दो बन्ने छैन । मलाई आशा छ, अब तिम्रो जीवन खुसीसाथ बित्ने छ । बिर्सिदेऊ त्यो घिनलाग्दो अतीतलाई र कल्पना गर, एउटा सुखी र खुसी जिन्दगीको ।
उनले भनिन्– दाइ, तपाईं त मलाई वेश्या भन्नहुन्न नि ?
– बहिनी भनिसकेपछि त्यस्तो किन भन्थे र नि !
उसले रूँदै भनी– म वेश्या होइन दाइ, होइन म वेश्या । म वेश्या हो भने त्यो ईश्वर के हो जसले मजस्तो नारीलाई जन्म दियो ? त्यो आइमाई जसको कोखबाट मैले जन्म लिएँ, त्यो नेता, ती लोग्नेमान्छे, त्यो आइमाई जसले मलाई जिउँदै नर्क पु¥याई, अनि त्यो समाज जसले मलाई वेश्या भनेर थुक्छ, त्यसलाई के भन्ने ?
दाइ मौन रहे । उनको प्रश्नको उत्तर उनीसँग थिएन ।
कलंकी पुगेर बस रोकियो । यात्रा पनि पत्तै नपाई बित्यो । सबै बसबाट झर्न लागे, हामी पनि झ¥यौँ ।
– ए भाइ, आऊ तिमी पनि एकछिन, मेरै होटेलमा बसौँ ।
मैले भने– होइन दाइ, ढिला हुन्छ । आज जसरी पनि सानोठिमी पुगेर ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्नुछ । आज काम भएन भने बस्न तपाईंको होटेलमै आऊँला नि ।
— ल दिदी, अब खुसीसँग बस्नुहोला । फेरि त्यस्तो दुःख नपरोस् मेरो कामना । उनको अनुहारमा खुसी फक्रँदै थियो । म झोला बोकेर आफ्नो बाटो लागेँ ।
त्यो यात्रा, उनको रोदन र वेश्या शब्दले यो मानसपटल आज पनि विक्षिप्त बनिरहन्छ ।
के हो वेश्या भनेको ?